I-Pasta isaladi iresiphi nokulungiselela - Indlela yokuphumelela isaladi le-pasta
I-Pasta Salad Recipe | Ukudla nokuphuza
I-Lukawarm herbal pasta isaladi iresiphi
Akukho okuvamile kaningi emajatsheni aseJalimane njengama-noodle. Zitholakala kuzo zonke izinhlobo ezicatshangelwayo. Ngezinye izikhathi basuke beba yi-gossamer, bese behlala isikhathi eside, noma bephelela phezulu embizeni yamanzi ashisayo. Ababonisi kuphela besiteji se-pasta banomqondo wokubuka ukuthi iyiphi i-noodle engcono kakhulu yimuphi isidlo. Ngaphandle kweziphakamiso zezithako zangaphandle, sinikeza iresiphi yesaladi ye-pastadi yakudala.
Mhlawumbe i-tagliatelle noma i-farfalle - noma ingabe kufanele kube yiyona ndlela ye-classic ye-spaghetti? Futhi ngokuphindaphindiwe, umbuzo ofanayo uphakama: Unempilo kanjani i-noodle? Ubani oye wabhekana nezimpendulo, ufika esiphethweni: Ubani othayayo ngokulinganisela, uphila impilo enempilo, ngoba ama-noodle ayimithombo yamandla enamandla.
I-Pasta isaladi iresiphi yesaladi lesikhumba esidala
Noma kunjalo, kuhle ukubuka okuqukethwe kwekhalori lama-sauces. Futhi yilokho kanye lapho isaladi ethandwayo edlalwa khona, ngoba yilezi ezintathu: okuhlwabusayo, okunempilo futhi okunempilo.
Kunezinhlobo eziningi zokupheka zekhadi le-pasta elizibophezela izitsha eziningi njenge-dish side.
Yiqiniso, futhi ku-ingosi ensimini noma njengenkambo evamile ethandwayo ephathini lokuzalwa kwezingane. Uma impahla pasta kuyinto ezingavamile tinged nge izinongo ejwayelekile Asian, ngezinye izikhathi isaladi iza ke classically - ngokwesibonelo, nge cherry utamatisi, emapheshana inkukhu, salmon noma asparagus. Imicabango ngempela ngaphandle komkhawulo, ngoba izitsha njengoba uhlangothi kukhona ngisho clams, amakhowe, i-arugula futhi ukwatapheya.
Kodwa-ke, kufanele ukhokhele ukunakekelwa okuningi ngaphambi kokuba isaladi lika pasta linikezwe
Ukunambitheka okuhle kunikezwa kuphela lapho isaladi isanda kulungiselelwa. Uma lokhu kungeke kwenzeke, isibonelo, ngenxa isikhathi izingqinamba, isaladi kufanele iphele "basebusika" yayo kule esiqandisini okungenani ihora ngaphambi kokukhonza.
Lapho noodle okuphekiwe, kumelwe babe abaphile al dente, ngoba bangobani "kuphekwe" ngeke babe khona izivakashi lucky etafuleni lakhe. Futhi ukuze ngiyiqonde ngokungeyikho inani pasta kuphekwe, kufanele ube mthetho engqondweni: yikhulu amagremu pasta esimweni eluhlaza luhambisane cishe ukuze 200 280 amagremu pasta okuphekwe.
Akubona nje ukuthi ubheka okuhle, empeleni uyamjabulisa wonke umuntu. Ukwenza abantu ababili bajabule, umpheki noma ukupheka udinga okulandelayo
isigamu sophisipele obomvu nesigamu
izaqathe ezimbili ezincane
Ama-160 amagremu we-broccoli
I-80 amagremu we-tagliolini enhle
izipuni ezinhlanu zamafutha
utamatisi ovuthiwe amabili
isigamu sehafu ka-parsley e-plain
amagatsha amahlanu we-thyme
iziqu ezintathu zelamula lemon
amaqabunga amane amancane
iziqu ezintathu ze-basil enkulu
isipuni samaji kalamula futhi
ukuthinta pepper omnyama kusuka etsheni.
Ukulungiselela isaladi le-pasta:
I-pepper ibhakwa ngamaminithi ayisishiyagalombili ngemva kokugaya, bese ihlunga isikhumba bese igaxa.
Ama-karoti ahlutshiwe futhi anqunywe zibe tincetu ezincane, i-broccoli iyinhlanzi.
Ama-noodle aphekwe ekupheleleni emanzini anosawoti, izaqathe kanye ne-broccoli zibagcine inkampani imizuzu emine.
Ngokulandelayo, ama-noodle ahlile ahlotshaniswa utamatisi osikiwe.
Zonke lezi zitshalo zihlutshiwe noma ziqoshiwe.
Okokugcina, i-pepper kanye no-utamatisi iyashiswa emgqeni omncane wamafutha futhi uhlanganiswe ngaphansi kwama-noodle.
Okubaluleke kakhulu: Iladi le-pasta liza masinyane emva kwalokho lihlanzekile futhi lizuze etafuleni.
I-Feuerzangenbowle Recipe | Ukudla nokuphuza
American kwasekuseni recipe ukudla American
I-recipe ye-Barbecue - inyama enqunywe yi-skewers ne-barbecue sauce
Recipe amazambane casserole
I-Recipe spaghetti bolognese
I-ostrich steaks iresiphi yokugcoba
I-Baking recipe strudel recipe
Ukupheka isinkwa esiphezulu | Isinkwa se-Recipe
Ikhebula le-herb i-whisky ibhotela ye-grilling
Ukupheka isinkwa sembewu yamathanga - iresiphi Isinkwa
Isinkwa sonke sekolweni - isinkwa sokupheka
I-Mexican Cuisine - I-recipe ye-Taco